Abaaro daran oo ku dhuftay waqooyiga Soomaaliya - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Abaaro daran oo ku dhuftay waqooyiga Soomaaliya
La daabacay onsdag 23 november 2016 kl 15.34
"Abaaro laga naxo ayaa ka taagan Soomaaliland"
Abaarta waxay saameysay waddamo badan oo ku yaala bariga Afrika, sida Soomaaliya iyo Itoobiya. sawir: Mulugeta Ayene
Sacad Cal Shire, wasiirka arrimmaha dibadda iyo xiriirka caalamiga Somaliland.
Sacad Cal Shire, wasiirka arrimmaha dibadda iyo xiriirka caalamiga Somaliland. sawir: Sawirle: Kenadid Mohamed/ Sveriges Radio.
Abaaro xoog leh ayaa ka taagan qaybo badan oo ka mid ah dalka Soomaaliya, gaar ahaan goboladiisa waqooyi ee Soomaaliland iyo Putland.
Abaarahan ayaa dabo socda saameyntii ay reebtay mucjisada cimilo ee la yiraahdo El níno oo waddamada uu maro dhulbaraha aduunka abaar roob la'aan u soo jiidey. Ururka laan-qeyrta cas ayaa xaladda degaanada abaaraha ka taagan yahiin welwel ka muujiyey kuna baaqay gurmad in loo fidiyo dadka abaaruhu haleleen.
– Saameynta ay El níno ku reebtay soomaaliya waxay la mid tahay deegaanada deriska la ah. Cunto yari ayaa ka jirta, xoolahii biyo la’aan ayey u la’anayaan, taas oo iyana mugdi sii gelisay masruufka mustaqbal ee dadyowgan, ayey tiri Michaela Fribeg Storey oo madax ka ah waaxda howlaha caalamiga ah ee ururka laan qeyrta cas ee Sweden.
Abaartii ugu darneyd muddo 30 sanno ayay dadka qaarkii ku tilmaamayaan midda hadda ka taagan qaybo ka mid ah Soomaaliya, gaar ahan Soomaaliland iyo Putland. Warbaxin dhawaan ka soo baxday Qaraamada Midoobey ayaa lagu sheegay in carruur kor u dhaafaysa 320 00 ay nafaqo la’aan la ildaran yahiin kuwas oo u baahan gurmad degdeg ah. Guud ahaan Soomaaliya dadka ku nool marka laysku geeyo shantii labo ayaa wajahaya cunto yari, sida lagu yiri warbaxinta QM.
Baad iyo biyo la'aan
Rhoda Elmi oo ah waiilka Soomaaliland ee Sweden ayaa dhawaan tagtay goobaha ay abaaruhu ka jiraan ee Soomaaliland. Waxayna sheegtay mar ay u warrameeysay laanta idaacadda ee luuqadda soomaaliga in goobaha ay tagtay ku ay soo aragtay baad iyo biyo la’aan ka taagan.
- Runtii wax laga naxo. Dad badan baa xoolahoodii biyo beeleen, dhulkii nabaad guuray oo xoolahoodii dhan ka dhinteen, waa waxay ku noolaan lahaayeen sanadyada soo socda. Dad xoolahoodii waayey iyagiina biyo la’aan iyo cunto la’aan ku dhacday oo ay ka muuqato ayaan soo arkay, ayey tiri Rhode Elmi.
Rhoda waxay sheegtay in dhibaatada abaarta laga dhaxlay si gooni ah looga dheehan karo carruurta iyo dadka kale ee nugul, sida waayeelka. Biyo la’aantuna ay tahay qatar koobaad ay wajahayaan.
- Waxyaalo badan baa la socda markey timaado biyo la’aanta, xanuuno kalaa la socda, shuban baa la socda. Waxay sii kordhineysaa qatarta ah xoolaha iyo dadkuba in ay dhintaan.
Gobalada ay abaarta faraha ba’an ku heyso, marka laga hadleyo Soomaaliland waxaa ugu daran gobolka Togdheer iyo sanaag, sida ay tiri Rhoda Elmi oo dhawaan ka timid soomaaliland soona aragtay goobaha abaaruhu ka jiraan.
Balse ma ahan keliya Soomaalilanda meelaha ay abaaraha sida ban u saameeyeen, waxay abaaro ba’an ka jiraan qaybo ka mid ah Putland, Hiiraan, Galgaduud, Gedo iyo Jubbooyinka, sida lagu sheegay warbaxinta Qaramaada Midoobey. Goobahan ayaa xili roobaadkii gu´ga iyo dayrta laga waayey ama roob sidas u badneyn ka da’ay. Iminkana xilli jilaalkii ayaa la galay, kaas oo socon doona illaa iyo bisha april.
Si gurmad loogu fidiyo dadka abaaraha saameeyeen ayaa dadka soomaaliland ka soo jeeda ee Sweden iska aruurinayaan dhaqaale, sida ay noo sheegtay Rhoda.
Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland Sacad Cali Shire oo todobaadkan booqashu ku joogay Sweden ayaa ugu baaqay guud ahaan soomaalida Sweden in ay gacan ka geystaan sidii qaylo-dhaan u gaarsiin lahaayeen caalamka dhammaantii. Waa in aysan ku ekaanin dadka Soomaaliland ka soo jeeda ama dadka Soomaaliya ka soo jeeda oo keliya. Dadka ku nool Sweden meesha ay doonaan ha ka soo jeedaan in ay arrinkas gaarsiyaan, waayo xaalad adag baa jirta oo ka balaaran kana baxsan awoodda aan ku maareyn karni laheyn.
- Waxaynu u baahan-nahay caalamka oo dhan arrintan in aan gaarsiino oo gargaar degdeg ah dadkii lala soo gaaro, ayuu yiri Sacad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliland oo u waramyey Raadiyaha Sweden qaybta soomaaliga.